Na Eng - McKnight Foundation
Maaddaama uu yahay agaasimaha isgaarsiinta ee hay'adda McKnight Foundation, Na Eng wuxuu kormeeraa dhammaan isgaarsiinta dibedda ku baahsan. Waxay xubin ka tahay kooxda hogaaminta sare ee McKnight waxayna talo siisaa madaxweynaha iyo guddiga.
Tan iyo markii uu ku soo biiray McKnight ee 2015, Eng wuxuu hormuud u ahaa dhowr dadaallo isbadal oo hay'ad ah, oo ay ka mid tahay fududeynta dib u eegista hadal qoraal ah iyo Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, iyo waliba aasaaska bayaankii ugu horreeyay ee ku saabsan kala-duwanaanta, sinnaanta, iyo ku-daridda. Markii la dhisay koox karti leh, kooxda hal abuurka-dijitaalka ah, Eng wuxuu kordhiyey awoodda Aasaasiga ee lagu bixiyo daahfurnaanta, aqoonta la wadaago, faafinta fikradaha, iyo inuu la kulmo yoolalka abaabul.
Markii hore, Eng wuxuu kaalin firfircoon ka qaatay isgaarsiinta Guddiga Qaxootiga Mareykanka, Golaha Minnesota ee aasaaska, iyo hay'adda Mercy Corps. Meelahaas, waxay maareysay xiriiro kala duwan oo xagga warbaahinta ah, isgaarsiinta istiraatiijiyadeed, iyo dadaallada ka qeybgalka bulshada.
Eng ayaa sifiican u cabirtay dareenkeeda ku aaddan sheekaynta muddo labaatan sano ah suxufiyad ahaan magaalada New York. Soo saare PBS iyo CNBC, waxay u safray adduunka si ay ugu turjunto arrimaha siyaasada guud ee murugsan sheekooyinka aadanaha ee la fahmi karo. Shaqadeeda waxay heshay abaalmarino badan, oo ay kujiraan abaalmarin Emmy Award, Edward R. Murrow Award for Documentary Best, iyo dhowr Abaalmarino Madaxeedkii hore ee Qaranka.
Waxay baratay warbaahinta iyo isgaarsiinta waxayna dhammaysay dardargelinta isku dhafka barnaamijka BA / MIA ee Jaamacadda Columbia. Waxay ku dhammeysatay tababar Machadka Hoggaaminta Rockwood waxayna qaadatay casharro iyada oo loo marayo barnaamijka fulinta ee Iskuulka Ganacsiga ee Columbia.
By Na Eng Luulyo 2021
U dabaal degaya Jasiiradaha Aasiya Ameerika ee Baasifigga ee Minnesota
By Na Eng, Molly Miles Maarso 2021
Noocyo Iftiimin ah oo Muhiim u ah Dabaaldega
By Na Eng, Molly Miles Abriil 2020
Xusuusin mahad celin loogu talagalay Taageerida Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyada
By Na Eng Abriil 2019
Diyaarinta Saameynta: Isticmaalka Shabakadda Dib u habeyn si loo hagaajiyo isdhaafsiga, sinaanta, iyo ka mid noqoshada
Sida Loo Bilaabo Isku Beddel Dijital
By Phil de la Vega, Na Eng November 2018
Tixgelin Istaraatiijiyadeed Dijital ah
By Na Eng, oo soo saarey 5x5 May 2018
Ku soo dhawoow Boggeena Cusub!
By Na Eng March 2018
Sidee Xiriirrada Hore u Heli Karaan Horumarinta
By Na Eng Juun 2017